ရဲရင့်သက်ဇွဲ – လူဟာလူပဲ …ပြောစမ်းပါ ..ဘာကွာလဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
လူဟာလူပဲ …ပြောစမ်းပါ ..ဘာကွာလဲ
အာသာပြေ အစာချကြွေးသလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး ….
အားကြီး ပြောကြတာပဲ …)
ခေတ်ကြီးကိုက လက်ခုတ်လက်ဝါးတီးကြ …..
လူတိုင်းလူတိုင်း လူ့ အခွင့်အရေး ရသင့်ပါတယ်……
စဉ်းစားကြ …စဉ်းစားကြ…. လောကအတွက်….
One Response to ရဲရင့်သက်ဇွဲ – လူဟာလူပဲ …ပြောစမ်းပါ ..ဘာကွာလဲ
Thet Naing on March 31, 2014 at 4:50 am
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိဖို့ဆိုရင် တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ နို့မဟုတ်ရင် “မတရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုပဲ ရှိလိမ့်မယ်။ ကျနော်တော့ လူကိုလူလိုပဲ မြင်အောင်ကြိုးစားတယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အညီ ပြင်ဆင်သင့်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရင် အသွေးအရောင်၊ ဘာသာ၊ လူမျိုးမခွဲခြားဘဲ လူတိုင်းဟာ သမ္မတဖြစ်ခွင့်ရှိရမယ်။ ဗမာမို့လို့၊ တိုင်းရင်းသားမို့လို့ ဆိုပြီး အခွင့်အရေး ပိုမယူသင့်ဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာ။ ကျနော့ကို ဆဲချင်ရင် ဆဲနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံ အမည်ကိုတောင် “မြန်မာနိုင်ငံ”လို့ ခေါ်တာကိုတောင် ကျနော်တော့ လိပ်ပြာမသန့်ဘူးဗျ။ ဖြစ်နိုင်ရင် National Reconciliation အတွက် (ဒီစကားကိုတောင် “အမျိုးးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး” ဆိုတဲ့ စကားထက် “တနိုင်ငံလုံး ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး” လို့ပဲ သုံးချင်တယ်ဗျာ။ “အမျိုးသားရေး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို ကြားရရင် စိတ်ကကို လိပ်ပြာမသန့်တော့လို့ပါ။) လူနည်းစုတွေက ယေဘူယျကျကျ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံအမည်ကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရင်တောင် ကျနော်တော့ လက်ခံတယ်ဗျာ။ ကျနော်ဟာ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဘိုးထားတယ်။ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှု ရှုထောင့်ကပဲ ကြည့်တယ်။ အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ ရှုထောင့်က လုံးဝမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ လောကကြီးကို ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင် စိတ်နဲ့ ရုပ် နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်မျိုးကလည်း တကယ်တော့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ သဘောမျှသာရှိတာပါ။ “စိတ်” နဲ့ “ရုပ်” ဆိုတာကိုက ပြောဆိုသုံးစွဲလို့ရအောင် အမည်သတ်မှတ်ထားတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။